Mid ka mid ah saaxiibada qaaska ah ee Maurizio Sarri oo sheegay xiliga ay Juventus xalin doonto heshiiskiisa – Gool FM - Idman News
Mid ka mid ah saaxiibada qaaska ah ee Maurizio Sarri oo sheegay xiliga ay Juventus xalin doonto heshiiskiisa – Gool FM
(Italy) 13 Juunyo 2019. Madaxweynaha kooxda Empoli ee Fabrizio Corsi oo lagu tiriyo saaxiibada qaaska ah ee Maurizio Sarri ayaa sheegay in Chelsea ay caqabad ku noqon doonto heshiiska uu Sarri ugu biirayo Juventus xagaagan.
Warar badan ee dhanka saxaafada Talyaaniga ah ayaa sheegayay isbuucyadii lasoo dhaafay in Maurizio Sarri uu ku dhow yahay inuu heshiis cusub qalinka ugu duugo kooxda Juventus, laakiin taasi ma aysan dhicin ilaa iyo haatan, maadaama macalinka reer Talyaani uu dhibaato kala kulmayo qaabka loo kansali lahaa qandaraaskiisa Blues.
Hadaba Madaxweynaha kooxda Empoli ee Fabrizio Corsi oo arintan ka hadlayay ayaa wuxuu yiri:
“Maurizio Sarri wuxuu dhibaato kala kulmi doonaa qaabkii uu kaga bixi lahaa kooxda Chelsea, wuxuu qabaa cabasho, waana mid macquul ah, laakiin Juventus ayaa ii sheegtay inay kalsooni ku qabaan in wax walba la xalin doono Sabtida soo aadan”.
Yeelkadeeda, sida ay wararku sheegayaan agaasimaha ciyaaraha ee kooxda Juventus ee Fabio Paratici ayaa xiliyada soo aadan ku wajahan magaalada London si uu wada hadalo toos ah ula yeesho agaasimaha guud ee kooxda Chelsea Marina Granovskaia.
Asc asxpteyda habeen wngsn Cawa dib ayuu nogu soo hagaga Faceboogena liketa …
Hogaanka premier league waxaa cawa la wareegtay kooxda Liverpool kadib markii …
Previous Previous post: Xiisadda Baladwayne ee dilka sarkaal katirsanaa ciidamada (dhegayso) – Radio Daljir
Next Next post: Dhagayso;- Warka Duhur Ee Radio Cadaado=13=06=2019